Soo dejisan Panda Free Antivirus 20.00.00 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesPanda Free Antivirus
Bogga rasmiga ah: Panda Free Antivirus
Panda Free Antivirus – software ah leh teknolojiyada casriga casriga ah iyo astaamaha aasaasiga ah si aad uga ilaaliso kumbuyuutarka ka dhan ah hanjabaado kala duwan. Antivirus waxay bixisaa ilaalin dhamaystiran xogta waqtiga dhabta ah noocyada kala duwan ee khayaanada iyo faylasha. Panda Free Antivirus waxay si wax ku ool ah u falanqeeysaa dabeecadda shakiga leh ee software-ka iyo kormeerayaasha geeddi-socodka firfircoon ee waxqabadka shakiga ah ka dibna ka dib markaa taasi waxay keenaysaa hanjabaad lagu ogaanayo karantiilaha. Software waxay taageertaa teknooloojiyada farsamaynta websaydhka kaas oo ka damaanad qaadaya ka ilaalinta shabakadaha internetka iyo aaladaha la xariira faylasha xaasidnimo ee internetka. Panda Free Antivirus waxay sameyn kartaa baaritaan buuxa oo PC ah, si xaddidan loo hubiyo bakhaaro cayiman ama khafiif ah iyo raadinta hanjabaadaha goobaha muhiimka ah. Software sidoo kale waxay awood u leedahay in ay bedesho habka antivirus default iyada oo waafaqsan baahida shakhsi ee user.
Daarista Hiddaha iyo Daawooyinka La-Dagaalanka
Xakameynta dabeecadaha aan la garaneynin
Ka ilaalinta shabakadaha internetka phishing
Tijiyaan ah USB kasta oo ku xiran PC
Soo dejisan Panda Free Antivirus
Faallo ku saabsan Panda Free Antivirus
Panda Free Antivirus Xirfadaha la xiriira